Otu esi achota Prestashop maka SEO na ntughari | Martech Zone
Wednesday, June 6, 2018 Thursday, June 7, 2018 Ashley Marsh
Me ahịa site na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị bụ ihe a na-ahụkarị taa na ụlọ ahịa na-enweghị atụ dị na ntanetị juputara na Internetntanetị. Prestashop bụ teknụzụ a na-ahụkarị n'ọtụtụ ebe nrụọrụ weebụ dị otú ahụ.
Prestashop bụ ihe e-commerce na-emepe emepe e-commerce. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 250,000 (ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 0.5%) weebụsaịtị gafee ụwa na-eji Prestashop. N'ịbụ onye teknụzụ a ma ama, Prestashop na-enye ọtụtụ ụzọ esi arụ ọrụ saịtị ejiri Prestashop rụọ ọrụ maka ogo dị elu na nchọta ihe ọmụmụ (SEO) na ịnweta mgbanwe ndị ọzọ.
Ebumnuche nke ọ bụla e-akaraihe saịtị bụ iji dọta okporo ụzọ na ịnweta ahịa ọzọ. Enwere ike imezu nke a site na ịmepụta saịtị maka SEO.
Ndị a bụ ụzọ ole na ole SEO nwere ike ịme maka saịtị Prestashop:
Na-ebuli Homepage - Ebe obibi gị dị ka ụlọ ahịa gị n'ịntanetị. Yabụ, ọ bụghị naanị na ọ masịrị ya kamakwa ọ ga-ebuli elu na nsonaazụ ọchụchọ ahụ. Iji mee nke ahụ, ị ​​kwesịrị ịgụnye ọdịnaya na isiokwu gị kachasị mkpa yana ihe atụ na ibe obibi gị. Ọdịnaya nke ibe ụlọ na isi ngwaahịa gị agaghị agbanwe agbanwe mgbe niile n'ihi na mgbe ahụ injin nyocha enweghị ike ikpebi ihe dị gị mkpa. Ọzọkwa, ibe obibi ga-adị ngwa ngwa iji kwado, enweghị mperi, ma nye ọmarịcha ihe nchọgharị.
Kpebie isi okwu gị - Ọ dị oke mkpa ka ị chọpụta isi okwu gị wee nwalee arụmọrụ ha site na iji ngwa Google Mgbasa ozi nke bụ akụkụ nke atụmatụ nhazi isiokwu. Nwere ike ịchọta nyocha ụwa na mpaghara kwa ọnwa, mkpa, na asọmpi nke isiokwu. Okwu ndị dị na asọmpi na nyocha bụ ndị kachasị mma maka isiokwu gị. Ngwaọrụ ọzọ kwesiri ịtụle bụ Semrush ọ bụ ezie na ọ bụ ngwá ọrụ ịkwụ ụgwọ.
Mpụga njikọ - Inwe njikọ site na saịtị ndị ọzọ na saịtị gị bụkwa SEO ụzọ aghụghọ. Nwere ike ịkpọtụrụ ndị na-ede blọgụ ma pịa saịtị ntọhapụ. Ndị na-ede blọgụ nwere ike ikwenye ide banyere ngwaahịa gị ma nye njikọ gị na saịtị gị. Nke a ga - enyere naanị aka wulite njikọ ndị dị na mpụga kamakwa ọ ga - eme ka ohere saịtị gị na - adọta okporo ụzọ sitere na njikọ ndị a. I nwekwara ike bipụta gị pịa a na dị iche iche na saịtị nke bụkwa ezigbo isi iyi nke na-adọta okporo ụzọ gị na saịtị. Zọ ọzọ iji nweta njikọ ndị dị na mpụga bụ ide ederede ndị ọbịa. Nwere ike nweta ntinye aka na saịtị gị na posts ndị a. Otu ụzọ ọzọ bụ ịchọ saịtị ndị kwuru na saịtị gị na-enweghị inye njikọ. Can nwere ike ịjụ ha ka ha tinye njikọ na saịtị gị.
Dejupụta ozi ngwaahịa niile achọrọ - Dejupụta ubi niile achọrọ dị ka nkọwa ngwaahịa, edemede, na ndị nrụpụta nwere ọdịnaya izizi. Nke a dị mkpa site na echiche SEO. Ọzọkwa, ị kwesịrị ị na-enye ozi maka ihe ndị a - meta meta, meta description, and meta labels in the info info. Kwesịrị ịnye URL kwesịrị ekwesị.
Gụnyere nhọrọ mmekọrịta mmekọrịta - Inwe mmekọrịta ndi mmadu na ebe nrụọrụ weebụ gị ga - enyere aka. Mgbe ndị mmadụ kesara ọdịnaya gị na ndị enyi ha, ọ na - eme ka ohere ịdọrọ ha gaa na saịtị gị. Wayzọ a, ị nwere ike nweta ndị ahịa ọhụrụ na weebụsaịtị gị.
Nweta saịtịmaap na robots.txt - Nchịkọta Sitemap nke Google na-enyere gị aka ịmepụta saịtị saịtị maka saịtị gị ma debe ya. Ọ bụ faịlụ XML nke na-edepụta ngwaahịa na ibe saịtị niile. A na-eji saịtịmapị na ịdepụta ibe ma ya mere ọ dị mkpa site na echiche SEO. Robots.txt bụ faịlụ na-emepụta akpaaka na Prestashop ma na-agwa ndị na-agagharị engine na spiders nke akụkụ nke saịtị Prestashop ka ọ ghara ịdepụta. Ọ na-enye aka na ịchekwa bandwidth na ihe nkesa.
Inwe kalenda ọdịnaya na isiokwu nwere isiokwu - Ọ bụrụ na saịtị gị nwere ngwaahịa niile maka oge ọ bụla akọwapụtara, mgbe ahụ ị nwere ike bipụta isiokwu na ụbọchị ndị ahụ yana ibe ndị ọzọ na-atụ aka na ibe a. Can nwere ike ide edemede gụnyere isiokwu ndị kachasị dị mkpa n'oge a. Agbanyeghị, mmadụ agaghị anwa ịbuba ọtụtụ mkpụrụokwu n'otu isiokwu n'ihi na nke a nwere ike ịmegharị injin nchọ.
Weebụsaịtị ngwa ngwa - Ecommerce saịtị na-adịghị nwayọ nwere ike belata ọnụego ntụgharị, ahịa na ogo nchọta ọchụchọ. Yabụ, ọ dị ezigbo mkpa na weebụsaịtị ibu ngwa ngwa. Importantfọdụ dị mkpa aro ka a ngwa ngwa loading website bụ:
Ihe oyiyi na-adịghị mma nwere ike ibelata mkpokọta weebụ yabụ ọ dị mkpa na a ga-echekwa onyonyo ahụ maka webụsaịtị ngwa ngwa.
Ikwesiri wepu modulu niile a na-achoghi ka ha na-ebelata weebụsaịtị. Enwere ike ịmata modulu arụ ọrụ site na enyemaka nke ịpịpụ profaịlụ site na ngalaba Prestashop.
Iji CDN (Ntanye Ntanetị Ntanetị) ga - enyere aka webụsaịtị ngwa ngwa ọbụlagodi na ọnọdụ ndị dị anya na sava Bochum.
Enwere ike iji sistemu mkpuchi Prestashop ma ọ bụ nke enyere nke ndị ọzọ dịka XCache, APC, ma ọ bụ Memcached iji mee ka weebụsaịtị ngwa ngwa.
Achọbara ajụjụ cache uru maka MySQL bụ 512 MB. I kwesịrị nụchaa uru ọ bara ma ọ bụrụ na ọ naghị arụ ọrụ.
Prestashop na-enye engine arụpụta iji bulie ndebiri akpọrọ Smarty. Enwere ike ịhazi ya maka arụmọrụ ka mma.
Jiri Schema.org - Ntọala atụmatụ na-enyere aka melite weebụsaịtị site na ịmepụta usoro ihe eji emepụta data nke ana-akpọ snippet ọgaranya. A na-akwado ya niile isi engines ọchụchọ. Mkpado "itemtype" na - enyere aka ịkọwa ma ihe bụ weebụsaịtị, ụlọ ahịa dị n'ịntanetị ma ọ bụ ụfọdụ ọzọ. Ọ na - enyere aka ịkọwapụta peeji ndị ọzọ na - enweghị isi.
Iji nchịkọta Google na Google Search Console - Iji Google Analytics na Google Search Console nwere ike ịgụnye na weebụsaịtị ahụ site na itinye koodu na weebụsaịtị nke ndị ọbịa gị anaghị ahụ. Nchịkọta Google na-enye ozi bara uru banyere okporo ụzọ weebụsaịtị ebe Google Search Console na-enyere aka ịchọta ugboro ole edepụtara weebụsaịtị ahụ na nsonaazụ ọchụchọ na pịa-site na data
Wepụ peeji abụọ - Ọ bụghị ihe a na-ahụkarị maka ibe abụọ iji mee Prestashop. Ha nwere otu URL di iche iche. Enwere ike izere nke a site na ịnwe otu ibe ma ọ bụ na-arụ ọrụ na Prestashop isi maka aha dị iche, nkọwa meta, na URL nke ibe ọ bụla.
Jiri redire mgbe ị na-akwaga - Ọ bụrụ na ị kwaga na Prestashop site na weebụsaịtị ọzọ ị nwere ike iji ntugharị 301 na-adịgide adịgide iji gwa Google maka URL ọhụrụ ahụ. I nwekwara ike iji ngwa ọrụ ntụgharị ntụgharị.
Wepụ URL ngwoolu - Prestashop 1.5 nwere ike iwepụta URL nwere asusu Spanish nke bụ ahụhụ na ọ kwesịrị idozi.
Iwepụ NJ - Prestashop na-ekwusi ike na ijikọ ID na ngwaahịa, edemede, onye nrụpụta, onye na-eweta ngwaahịa, yana ibe nke na-egbochi SEO. Ya mere, a ga-ewepụ NJ ndị a site na ịgbanwe isi ma ọ bụ ịzụta modul maka iwepụ NJ.
Na mgbakwunye, Prestashop na-enyekwa modulu SEO nke nwere ike ịba uru dị ukwuu na njikwa ọrụ SEO niile dị mkpa. Ebumnuche nke azụmahịa ọ bụla na-enweta ego na nke ahụ ga-ekwe omume naanị site na ịnweta ọnọdụ dị mma na nsonaazụ ọchụchọ engine. Prestashop na-enye ụzọ dị mfe SEO nwere ike isi tinye n'ọrụ na-eme ka ọ bụrụ nhọrọ doro anya maka azụmahịa e-commerce.
Ashley Marsh bụ Senior- Afọ edemede na Ọnụ ego nke Maan Softwares Inc. Ya na ụlọ ọrụ a anọwo afọ anọ gara aga. Ọ bụ ọkachamara na ụdị edemede teknụzụ kachasị na mmepe mkpanaka, ntanetị weebụ, na, teknụzụ kachasị ọhụrụ. Dịka ya si kwuo, ọ bụụrụ ya nnukwu ihe ngosi dịka ụbọchị ọ bụla teknụzụ na-emelite onwe ya na-eweta echiche ọhụrụ na-eme ka ọ dị ọhụrụ kwa ụbọchị.
Mmụba Dynamic: AI-Kwadoro Teknụzụ Njirimara Omnichannel